चीनको आकाशमा ‘उसकै नक्कली चन्द्रमा’, तर कति सम्भव ? - SangaloKhabar
चीनको आकाशमा ‘उसकै नक्कली चन्द्रमा’, तर कति सम्भव ?
काठमाडौँ । चन्द्रमाको बारेमा हामी प्रायः चलचित्रको गीतमा सुन्ने गरेका छौँ । सबै कवि, लेखक र शायरहरुले चन्द्रमाकै पर्खाइमा आफ्नो रचनाहरु रच्ने गरेका छन् ।
तर, अब चीनको आकाशमा भने हर समय चन्द्रमा देखिने दाबी गरिएको छ । चीनको एक कम्पनीले आकाशमा कृत्रिम चन्द्रमा पठाउने योजना बनाइरहेको घोषणा गरेको छ । जसले रातमा चीनको आकाशलाई उज्यालो बनाउने उसको दाबी छ ।
अहिलेसम्म यस योजनाको बारेमा धेरै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । तर, जति जानकारी आएका छन्, त्यसमा कयौँ प्रश्न तेर्साइएका छन् । सबैभन्दा पहिले गत हप्ता पिपल्स डेलीले यो समाचार प्रकाशित गरेको थियो । जसमा वु चेनफेङको बयान प्रकाशित गरिएको थियो । वु छेङ्दु एयरोस्पेस साइन्स इन्सिटिच्युट माइक्रोइलेक्ट्रोनिकस सिस्टम रिसर्च इन्सिटिच्युटका चेयरम्यान हुन् ।
वुले सन् २०२० सम्ममा भूउपग्रह पठाउने योजना योजना अनुसार कयौँ वर्षदेखि काम भइरहेको र यो अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन् । चाइना डेलीले वुलाई नै उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्म चीनले यस्ता थप तीन भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
चाइना डेलीका अनुसार यो नक्कली चन्द्रमाले एउटा ऐनाले जसरी काम गर्नेछ । यसले सूर्यको प्रकाशलाई प्रतिबिम्बित गरेर पृथ्वीमा पठाउनेछ । यो पृथ्वीबाट ५ सय किलोमिटरको दुरीमा रहनेछ । लगभग यही दुरीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन पनि रहेको छ ।
यसको अनुपातमा पृथ्वीबाट चन्द्रमाको दुरी तीन लाख ८० हजार किलोमिटर रहेको छ । रिपोर्टमा सो कृत्रिम चन्द्रमा कस्तो देखिनेछ भनेर पनि स्पष्ट पारिएको छैन । यद्यपि, वुलाई उद्धृत गर्दै उक्त कृत्रिम चन्द्रमाको प्रकाश १० देखि ८० किलोमिटरसम्म फैलिनेछ र यसले वास्तविक चन्द्रमाभन्दा ८ गुणा बढी प्रकाश दिने बताइएको छ ।
छेङ्दु एरोस्पेसका अधिकारीहरुको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने यो नक्कली चन्द्रमाको उद्देश्य भनेको पैसाको वचत गर्नु हो । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, अधिकारीहरुका अनुसार जति खर्च सडक बत्तिमा लाग्छ, त्यसको तुलनामा यो चन्द्रमा सस्तो हुनेछ ।
यसको अलावा भूकम्प र बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट पनि यसलाई कुनै असर हुनेछैन । त्यस्तो समयमा पनि नक्कली चन्द्रमाले प्रकाश दिइरहनेछ । ग्लास्गो विश्वविद्यालयमा स्पेस सिस्टम इन्जिनियरिङका प्रवक्ता डा. म्याटियो सिरिओटीले बिबिसीसँग कुरा गर्दै यो योजनालाई लगानीको रुपमा हेरिरहेको बताए ।
डा. सिरिओटी मान्छन् वैज्ञानिक रुपमा यो गर्न सम्भव छ । तर, यसको समस्या भनेको दुरी हो । यो नक्कली चन्द्रमालाई छेङ्दुको आकाशमाथि यस्तो ठाउँमा स्थापित गरिनेछ जसले यसको प्रकाश त्यहीको सानो क्षेत्रमा पुग्नेछ ।
पूरा विश्वको क्षेत्रफलको हिसाबले यो निकै सानो क्षेत्रफल हो । यसको अर्थ यसलाई एक स्थिर कक्षको आवश्यक पर्नेछ जुन पृथ्वीबाट ३७ हजार किलोमिटर टाढा छ । उनी भन्छन्, ‘एक खास क्षेत्रलाई मात्र उज्यालो बनाउन यो भूउपग्रहलाई निश्चित स्थानमा राख्नुपर्नेछ, यही नै यसको लागि ठूलो समस्या हुनेछ ।’
तर, चीनको सामाजिक सञ्जालमा यस चन्द्रमाको बारेमा चर्चा र चिन्ता दुवै छ । केहीले चन्द्रमाको कारणले रातको समयमा जाग्ने प्राणीलाई असर गर्ने बताएका छन् । केहीले भने चीनमा प्रकाशसँग जोडिएको प्रदूषणको समस्या रहेको छ र यो चन्द्रमाले त्यसलाई थप बृद्धि गर्नेछ ।
नाम्या २ नामक एक स्याटलाइटलाई पृथ्वीबाट ५ किलोमिटरको व्यासमा प्रकाशका लागि पठाइएको थियो तर, त्यो जलेर खत्तम भएको थियो । यसपछि ९० को दशकको अन्त्यमा नाम्याको ठूलो मोडल बनाउने प्रयाश भएको थियो तर त्यो पनि विफल भयो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक ०६, २०७५ समय: ११:२८:३८